トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Ahlangana kunye neqabane umphefumlo ngomphefumlo amawele embonweni ngokomoya? Hit?
Umfazi ukubuza asihlole umbono oomoya, kodwa kukho abantu abaninzi abanqwenela ukuba anamathele ezenzeka ebantwini, kwaye uqhelene ihlabathi kancinane ngakumbi yokomoya, nabo Irasshaimasu ungathanda ukuba ubotshwe iqabane umphefumlo umphefumlo iwele .
iqabane umphefumlo kunye neqabane umphefumlo, nezaziwa ngokuba iqabane umphefumlo, kuye kuthiwa livakale efanayo kwinqanaba umphefumlo umntu ohlobene ukusuka ekuphileni kwangaphambili. Amaxesha amaninzi bafana komhlaba kunye nenkangeleko neempawu ngaphakathi, ukuba abo ba- asetyenziswe kuzo Soshisoai.
ngokutsha umphefumlo ngamawele, yintoni enye umphefumlo ekuqaleni, ebizwa into yahlukana umntu omnye umntu umphefumlo wam amawele. Nazo ukuba kweli hlabathi, akunyanzelekanga ukuba alibophe. Nokuba uthe wadibana umphefumlo ngamawele, kubantu emibini zihanjiswa Kukho zigaba asixhenxe (nezaziwa ube liqonga kunye kwetyala), oko kuthiwa abantu ababini ebotshelelwe xa ufika phezu zombini.
Ngoku, ukuba iqabane umphefumlo kunye Seoul, kubonakala abanye abantu baye kubo ziphicothwa abenzi-mathamsanqa, kuba ezi imixholo kwinqanaba umphefumlo, xa ithamsanqa-ngokuxelwa manani jikelele kunye isigaba (ukufunda wesundu okanye isigaba ubuso) Akujongwanga ukuba siqhube, kuba kukho abantu abaninzi abaye kuzo ziphicothwa ngumbono ngokomoya oosiyazi.
umbono ngokomoya yaye nokuvumisa, kungekhona ukuthetha into eyahlukileyo ngokupheleleyo, into ersatz. Le kukuqwalaselwa iqabane umphefumlo umphefumlo amawele, kukuba kwiimeko ezininzi umntu onamandla ikhethiwe inkqubo izangoma okanye ngokomoya.
reference | yombono ngokomoya yaye nokuvumisa, umahluko oosiyazi ithamsanqa-mathamsanqa sakho
trust kubaluleke rhoqo ukuze bajonge ukufumana izangoma ngubani
ukuze sidityaniswe kunye neqabane umphefumlo umphefumlo amawele kukuthi, kufuneka kuqala nazo, kuba nje ndadibana, ukuziphatha kwakho kuxhomekeke ukuthanda ukuba ukugqiba ebomini ngaphandle kweli hlabathi zinxulunyaniswa.
Ngoko ke, ukuba ufumana umbono ezizezomoya, umntu wokuqala abanazo naziphi na iimpawu ezinjalo, xa umele uphulaphule ukuhlangabezana apho.
kwaye emva kokuba akufika kuwo, kufuneka ukuba uye inkqubela ulwalamano ngononophelo mna cebiso oosiyazi ngubani onokumthemba rhoqo.
ingakumbi kwimeko komphefumlo ngamawele, yaye kuthiwa kukho zigaba asixhenxe abantu ababini libotshelelwe, kanye inkqubo, kukho isigaba ukuthi kwakhona bopha ukuba bhayi.
ngelo xesha, yaye yaba kwadalwa ukuba phula abantu ababini, kanye ngaphandle kwemvume Kimetsuke, apho isiphelo ubudlelwane phakathi amawele Seoul, abantu ababini ngaphandle kokuba libotshelelwe uya kuba ukuze ngokwahlukana.
Yiloo nto, ukuba ukucela umbono rhoqo kokomoya, enoba aba bantu babini ngoku apho eqongeni, yintoni into ekufuneka uyenze ukuze ngoku iqonga, kukho imfuneko ukuqhubeka ukukhangela ngabanye.
7 of de ubotshwe amawele Seoul (isigaba) Xa iinkcukacha ezichazwe
umphefumlo oliwele kweqonga, kuya kuba elide kakhulu, kufuneka ukuba angenise apha kuphela enjani na ibakala.
Isigaba sokuqala 'ingqalelo (intlanganiso) "_ x000D_ sesibini isigaba" test "
Isigaba sesithathu" ingxaki "
Isigaba sesine" kanti zikwasukela (ixesha cwaka, ixesha ngxi) "_ x000D_ isigaba sesihlanu" akabandulula "
kuqala 6 sigaba "wake up"
yesixhenxe kwisigaba "ngokuvumelana (sihlangane)" _ x000D_
ngandlel ndicinga ukufumana umfanekiso, kodwa isigaba ukuba Wowuqhekeza kanye ukuba okhankanywe ngaphambili linqanam yesihlanu "akabandulula" njengoko kuchaziwe apha. Ngaphandle, ezifana "ingxaki," "ixesha cwaka, ixesha yokunqaphela", abantu ukuya ku ezibini libotshelelwe, akunyanzelekanga ukuba kuphela iziganeko ezihle, inani le mingeni iya kuza.
ngaphandle kokwazi nantoni na, yaye ukuba behhlelwe zezi mingeni, njengoko phambili ekubeni bafumane neengcebiso ezinokugcinwa umbono ngokomoya rhoqo, ekugqibeni ukuba okanye hayi eludinini ngengqondo kunye namanyathelo oluchanekileyo ingahoywa anamathela umahluko omkhulu.
umbono ngokomoya asinto ingaqhelekanga balinge
reference | umbono ngokomoya iza off kuba wena? Esona sizathu yovavanyo umbono ngokomoya ngaphandle sakho Iinkcukacha
baya kuba kuxutyushwa kweli phepha, nokuba uya kuba enoba oosiyazi indlela obunyanisekileyo nabo ubuchule, ngokuxhomekeke ukuhambisana kunye ngamaza thethwano, yaye kukho kukuba izinga hit phantsi besithi we ngokuhlaziya. Ukuba
kunokuba ufuna ebotshelelwe iqabane umphefumlo umphefumlo amawele, abanobuchule kanye ukuhambelana kakuhle, yenye indlela kuba zekhefu ukufumana i izangoma ethembekileyo in advance. Ndicinga lula-to-ukuqonda kunye nokonwabela kunye nomfanekiso, ezifana ugqirha.
naye umphefumlo, okanye ekhangela izangoma kwi yokothuka kukwazi ukuba endadibana umphefumlo ngamawele, hayi kunokukhokelela kwakhona ukuba miss ithuba esibalulekileyo abotshelelweyo ayifumaneki kwabo.